Archive du 02-mars-2022
Adin’i Russie sy Ukraine Misabaka ny Malagasy, inona no mety ho vokany?
Fanehoan-kevitra feno fahamailoana, tsy te ho ratsy eo anatrehan’ny andaniny sy ny ankilany no nataon’ny Fanjakana Malagasy tamin’ny alalan’ny Praiminisitra Ntsay Chrisian omaly 01 martsa 2022,
Gaga ihany omaly naheno ny praiminisitra lehiben’ny governemanta nilaza fa maika amin’ny hanatanterahana ny vinan’ny filoham-pirenena Malagasy. Inona amin’izay vina izay moa izany no tena maha maika azy ny hanatontosa
Fahasalamana Miaro amin’ny aretina maro ny fanajana fepetra
Marina fa nidina ny tarehimariky ny Coronavirus, hoy ny dokotera mpitsabo, Dr Fidy Bariniaina, fa mila maminavina ny ho avy sahady isika. Ny jolay 2020 no tratra ny PIC ho an’ny andiany voalohany na “1ere vague”, hoy izy.
Ahiahina kolikoly avo lenta Omby 439 natao "fourrière" no tsy hita popoka
Miteraka savorovoro eo amin’ireo mpiompy ao Bongolava ankehitriny ireo omby 439 isa izay notazomina "fourrière " tao Andranomadio ka nanjavona Tsy hita satria voalaza fa navoaka tamin’ny alalan’ny "procuration ".
Vahaolana mitarazoka Nitroatra indray ny mpianatry ny Politeknika
Niroso tamin’ny grevy indray ny mpianatry ny Sekoly ambony politeknika Vontovorona omaly talata 01 martsa 2021 taorian’ny fahataperan’ny fe-potoana 24 ora nomeny ny tompon’andraikitra ara-panjakana hamaliana ny fitakiany.
Antananarivo isaky ny fahavaratra Efa tena tsy voafehy intsony ny rano
Hita ho tsy ahavaha olana intsony ny tatatra marivo tsy misy afa-tsy alalina 1 metatra maheru kely io, rehefa mandinika ny rano tondraka eto Antananarivo isaky ny misy rotsak’orana na dia kely aza.
Antsiranana Mirongatra indray ny asa ratsin’ ny foroche
Andiana tanora 10 ka hatramin’ny 20 taona no fantatra fa mivondrona ao anatin’ny fikambanan-jiolahy antsoina hoe Foroche any Antsiranana.
Fivorian’ny komity mpanatanteraky ny FMF “Misy olon-tsotra Malagasy sy vazaha manatrika”
Vao nisy federasionin’ny baolina kitra miisa 2 ny 24 febroary 2022 teo no nandatsahan’ny federasionina iraisampirenena na FIFA sazy,
Minisitry ny fampianarana ambony “Efa mizara karatra ny Paositra, hivoaka ny bourse…”
Nitondra fanazavana mikasika ny vatsim-pianarana ny minisitra ny Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa, Pr Assoumacou Elia Béatrice, omaly talata 1 martsa 2022,
Antananarivo Renivohitra Lasa Parking fitadiavam-bola ny tokontanin’ny EPP
Saika hatao parking na toerana fijanonan’ny fiarakodia sy ny moto amin’ny alina ny ankamaroan’ireo sekoly ambaratonga fototra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina.
Ntsay Christian « Tsy ho kandida izany aho amin’ny 2023 »
Nanambara Atoa Ntsay Christian omaly 01 martsa 2022 fa Praiminisitra notendrena handamina ny fandehan-draharaha eto anivon’ny firenena eo ambany fitarihan’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina, ary tsy mieritreritra ny hirotsaka hofidiana ho Filoham-pirenena.
Baolina kitra Malagasy Tsy maintsy iomanana ny sazy
Etsy amin’ny lapan’ny fitsarana Anosy izany anio maraina ny maso na dia efa maro mpampahatsiahy matetika fa tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy aza ity raharaham-pitsarana handeha anio ity satria dia tsy manam-pahefana
DREN Bongolava Misy maka ny volan'ny mpampianatra
Hafahafa ny zava-nitranga tany Bongolava momba ny vola fanampiana ho an’ny mpampianatra na "Subvention"
Imbiki H sy Fanirisoa E Ady tsy mety vita efa ho 6 taona
Ady tsy mety vita, sakay sy maso an-taonany maro, fifampiandrasana an-kendritohana,… Io no mamintina ny fifandraisan’Atoa Imbiki Herilaza sy Rtoa Fanirisoa Ernaivo, efa 6 taona teo ho eo izao.
Pasitera Heritiana “Miroso mankany amin'ny fara andro izao tontolo izao”
Isan'ny mitana ny sain'ny mpanara-baovao maro maneran-tany ankehitriny ny fivoaran'ny ady misy eo amin'i Rosia sy ry zareo Ukrainianina.
Tsaramandroso – faritra Boeny Raikitra ny fizarana kopia maimaimpoana sy kara-tany faobe
Miisa 1000 ireo zaza no tsy manana kopia nahaterana hoy ny ben’ny tanana kaomina Tsaramandroso faritra Boeny ka antony nanaovan’ny kaomina hetsika fizarana maimaaimpoana azy io mba ahafahana manampy ireo
Minisiteran’ny filaminam-bahoaka Misy polisy mitaraina fa hoe tsy nandray karama
Vaky taraina ireo solontenan’ny mpianatra ho polisy izay tamin’andiany Iratra nivoka ny tamin’ny 24 desambra 2021 fa tsy mbola nandray karama ara-dalana sy ireo tombotsoa.
Raibe namoa-doza Bevohokany enim-bolana ny zafikeliny
Raibeny namoa-doza 57 taona indray no nahavita nanolana ny zafikeliny vao 15 taona tao amin’ny fokontany Morafeno Atsimo, kaominina an-drenivohitr’Arivonimamo, volana maromaro lasa izay.
Soavimasoandro Voasambotra ilay lehilahy nanolana ny zanany vavy
Omaly no voasambotra teny Soavimasoandro raha araka ny fampitam-baovao avy tamin’ny olon-tsotra tsara sitrapo ilay Ray niteraka nahavita nanolana ny zanany vavikely vao 13 taona monja. 37 taona itsy voalohany raha ny fantatra.